QALADKA JOOJINKA Gooseneck Goosh Furtay
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada / WOWOW Gooseneck Kushiinka Qasabada Jooji oo Buufiyo
Qolka cuntada ee Gooseneck ee WOWOW oo leh xulashooyin badan oo shaqeynaya. Qalabka tayada sare leh ee waxqabadka wanaagsan. 5-sano damaanad. Ka iibso tubada kushiinka gooseneck hada!
2311701 tilmaamaha rakibaadda
Qasabadda jikada Gooseneck oo leh buufiye hoos u riixaya
Kushiinkaaga waa kibirkaaga oo waxaad dooneysaa isku darka ugu habboon ee qaabeynta iyo shaqeynta. Maalmahan waxaad dooran kartaa naqshadaha badan si aad u habeysid jikadaada riyada. Xitaa waxay noqon kartaa culeys inaad kala xulato dhammaan xulashooyinka gacantaada ku jira. Kaliya maahan in dhammaan qalabka jikada ay ku yimaadaan dhammaan noocyada qaababka iyo cabbirrada, laakiin sidoo kale waa inaadan qaddarin saamaynta xulashooyinka kala duwan ee tubooyinka jikada. Tubooyinka jikada waa meel muhiim ah oo muhiim ah jikada kasta. Ka sokow, tubooyinka jikada ayaa ka mid ah aaladaha loo adeegsado jikadaada. Markaad u isticmaaleyso tubada cuntada jikadaada si aad u diyaarisid cuntadaada, u maydho saxamadaaga, oo aad gacmahaaga u maydho, waxaad u isticmaashaa shey jikadaas ah marar badan maalintii. Marka waxaad kufiican inaad waqti badan gasho si aad uxuliso tubada jikada kuu habboon.
Tuubbooyinka jikada waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan iyo shaqooyin kala duwan si ay u bixiyaan baaxad ballaaran oo ku habboon dhammaan noocyada dalabaadka. Ka sokow, qasabadaha jikada waxay ku yimaadaan midabbo, cabbirro, iyo noocyo kala duwan. Noocyada ugu waaweyn ee qasnadaha jikada waa qasabadaha jikada soo jiida, qasabadaha jikada laga soo jiido, iyo qasnadaha dhaadheer ee jikada. Tuubbooyinka jikada sare ee arc sidoo kale waxaa lagu magacaabaa qasnado jikada gooseneck. Faa'iidada ugu weyn ee qasnadaha jikada gooseneck waa in ay siiyaan goob shaqo oo badan jikada kasta. Tuubbooyinka jikada ee dhaadheer gooseneck waxay ku siinayaan fursad aad ku heli karto saxanka jikadaada. Sidan oo kale, wax dhibaato ah kuma lahaan doontid inaad alaab waaweyn, sida dheri weyn ama digsi weyn, aad ku shubtid saxanka jikada, iyo hoosta tubada jikada gooseneck-kaaga weyn.
Tubada jikada oo si quruxsan loo naqshadeeyay
Nakhshadeeyayaasha WOWOW waxay u hureen dadaalkooda oo dhan inay ku siiyaan qasnado si qurux badan loo naqshadeeyay jikada gooseneck oo bixisa shaqeynta ugu fiican sidoo kale. Sababtoo ah qaabkeeda jilicsan, WOWOW qasabadda jikada gooseneck waxay kaa caawineysaa inaad si xarrago leh u dhameyso jikadaada. Qalabkan jikada sare ee arc ayaa hubaal siin doona kor u qaadista naqshadaynta jikada kasta. Iskusoo wada duuboo, waxay sidoo kale ku shaqeysaa waxqabad weyn oo leh buufiskiisa hoos u jiidan
Qashinkan buluuga ah ee loo yaqaan 'nickel gooseneck tubada jikada, oo sidoo kale loo yaqaan tubada qolka-qoorta-luqunta, waxay bixisaa muuqaal warshadeed leh walxo casri ah iyo kuwo aan waqti lahayn. Qolka cuntada ee jikada WOWOW makhaayadda gooseneck kuma jiri doonto meel joornaal kasta oo naqshadeeya oo muujinaya jikooyinka qaaska ah ee khaaska ah. Maaha wax aan ahayn, tubadan qolka cuntada lagu kariyo waa mid ka mid ah tubooyinka ugu sarreeya ee jikada ee WOWOW iyo ku faanadda alaab-qeybiyeyaasha kushiinka jikada ee adduunka.
Tubada jikada oo shaqeedu badantahay
Marka laga reebo qaabeynta, tubadan cuntada lagu kariyo ee WOWOW waa tubooyin badan oo shaqeynaya oo bixiya laba ikhtiyaar oo lagu buufiyo. Kaliya kaliya ma ahan tubadan arc-ga ee jikada sare inay bixiyaan durdur caadi ah si ay u buuxiyaan dheriyo iyo digsiyada tusaale ahaan. Intaa waxaa u dheer, waxay muujisaa qaab buufin raaxo leh oo si sahal ah loogu maydho suxuuntaada iyo weelka jikada si loogu bixiyo nadaafad heer sare ah. Waxaad si fudud ugu dhex beddeli kartaa labada ikhtiyaar oo leh badhanka ku yaal tuubbada tubbada. Taasi waxay suurta gal ka dhigeysaa in lagu beddelo xulashooyinka hal gacan inta aad biyo maydhaysid. Hawlaha beddelashada ma sababi doonaan wax buuq ah isla markaana fudeyd sida aad u baddelato badhanka ayaa kaa yaabin doona!
Qashin-qaadka jikada gooseneck-kaan wuxuu la imaanayaa tuubada 60-inji ah oo soo jiidata kaasoo bixisa soo-saaris fudud, sababta oo ah xarkaha dareeraha silikoon ee tubbada biyaha. Tuubadan, waxaad si fudud ugula bixi kartaa dhammaan meelaha adag ee ku xeeran saxanka jikadaada. Iskusoo wada duuboo, ada ada dabacsan ee is bedbeddela ayaa kuu saamaxeysa inaad si fudud u qotomiso inaad bixiso raaxada ugu badan. Qaabka fudud ee dib-u-celinta ee tubadan qolka cuntada lagu kariyo ayaa had iyo jeer kuu horseedi doonta tuubada tubada inay dib ugu laabato xaaladdeeda asalka ah kadib markaad nadiifiso. Dhibaato la'aan!
Tubada jikada Gooseneck leh tayo aad u fiican
Tuubada jikada gooseneck waxay ku siineysaa tayo waxaadna dareemeysaa in dhinac kasta oo ka mid ah qalabkan casriga ah ee jikada-sare leh. Qashinkan jikada gooseneck wuxuu culeyskiisu ka weyn yahay 70 oz, sidaa darteed waxaad isla markiiba ogaaneysaa inaad gacanta ku hayso alaab bir adag leh. WOWOW birta gooseneck-naxaasta leh ee naxaasta leh waxay leedahay dhammaadka nikkel, dhammaan isku-xirnayaashana si adag ayaa loogu xiray qalab tayo sare leh. Tani waxay ku siineysaa khibrad tubbo-la'aan ah iyo qashin-la'aan-tuubbo la'aan. Tayada ka sakow, tubadan jikada gooseneck ee WOWOW waa fududahay in la rakibo sidoo kale. WOWOW mashiinka jikada ee qaansada sare leh wuxuu kaliya ubaahan yahay 1, 2 ama 3 dalool jikada ah iyo, dhuumaha biyaha qabow iyo diiran. Qalabka loo yaqaan 'biraha biraha' ee labadaba 1, 2, ama 3-dalool jikada-dejinta ah, ayaa ka dhigaya qasabaddan jikada gooseneck mid ku habboon nooc kasta oo jikada ah. Waxay u dhigantaa noocyo kala duwan oo saxanno ah umana baahnid inaad la halgameyso magdhawga godadka ama godadka foosha xun.WOWOW waxay ku siineysaa xirmo dhammaystiran oo qalab ah.
Tubada jikada oo macquul ahaan lagu qiimeeyo
Maaddaama tayada qasabka jikada gooseneck ee WOWOW ay tahay mid aan muran lahayn, saamiga tayada qiimaha ee qasabadan jikada arc ee ugu fiican ayaa ugu fiican oo aad suuqa ka heli doontaa. Sababtoo ah WOWOW waxay isticmaashaa farsamooyin wax -soo -saar oo hal -abuur leh oo leh habab aad u otomaatig ah, waxaan ku siin karnaa qasabadan jikada gooseneck qiimo aad u jaban. Qasabadda jikada badiyaa waa shayga ugu dambeeya ee loo soo iibiyo jikada cusub oo la naqshadeeyay. Sidaa darteed qasabadaha jikada badanaa waa gelitaanka xidhitaanka miisaaniyadda guud ee jikada, halkaas oo inta badan xadka miisaaniyaddan hore loo soo dhawaado ama la gaadho. Sidaa darteed waxaa wanaagsan inaad ogaato inaad weli ka heli karto qasabadda jikada oo tayo sare leh miisaaniyad xaddidan.
Qolka jikadayada ee loo yaqaan 'gooseneck tubka jikada' waxaa laguugu soo diraa si bilaash ah, markaa ma wajihi doontid wixii kharash dheeraad ah. Waxa aad aragto ayaa ah waxa aad heshid, taasina waxay quseyneysaa qiimaheena sidoo kale. WOWOW waxaan daryeeleynaa macaamiisheenna waxaana rabnaa inaan ku siino suurtagalnimada inaad lahaato naqshad jikada heer sare ah oo qiime jaban ah.
Qolka jikada ee loo yaqaan 'gooseneck tub' oo aan ku kalsoonahay!
WOWOW waxay aaminsan tahay wax soo saarkooda sidaa darteedna kama baqeyno inaan ku siino 5 sano oo waqti damaanad ah. Ka sokow waxaan kuu soo bandhigeynaa heerka ugu sarreeya ee adeegga macaamiisha. Waxaan markasta diyaar u nahay inaan ku taageerno, xitaa markaan rakibayno qasabadda jikada gooseneck. Maaha wax bilaash ah waxaa sidoo kale laguu xaqiijinayaa 90-ka maalmood ee aan ku soocelinayno siyaasaddeena. Haddii aadan jeclaan doonin badeecada sabab kasta ha noqotee, waan kuu soo celin doonnaa adiga oo aan wax su'aalo ah la weydiinin. Sida aad u arki karto, WOWOW waxaan ku kalsoonahay alaabtayada!
Faa'iidooyinka tubada qubayska jikada goosene ee si kooban u:
Naqshad casri ah oo gaar ah
Mishiinka soo jiidashada oo isku dhafan
Laba hawlood oo buufin ah
Wuxuu isku daraa qaabka leh waxqabad sare
Waxaa laga sameeyey alaab naxaas ah oo tayo sare leh
SKU: 2311701 Categories: Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada, Qubeyska jikada Tags: Nickel caday, Hoos u jiid, Buufiyo
Jikada / Gudaha / Ganacsiga / Makhaayada
WOWOW Saliida Dheerta Naxaasta ah ee Dheerta Naaska Lagu Dheelo ee Mount Mount
La iibiyey: 37